नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : ‘यहाँ सुनको अवैध कारोबार हुन्छ रे हो ?
‘यहाँ सुनको अवैध कारोबार हुन्छ रे हो ?
‘हामी प्रहरी हौँ’ भन्दै ज्याकेटको खल्तीबाट हत्कडी र कम्मरमा भिरेको पेस्तोल देखाउँदै छ/सातजनाको समूहमा आएका अपरिचित व्यक्तिले सोधे– ‘यहाँ सुनको अवैध कारोबार हुन्छ रे हो ?
गत शुक्रबार राति ७.४५ बजे हनुमान ढोका क्षेत्र मरूहिटीस्थित प्रेमरत्न शाक्यको घरमा सञ्चालित सुनका गरगहना निर्माण गर्ने कारखानामा छिरेका ती अपरिचित व्यक्तिले त्यसपछि गहना बनाउँदै गरेका छ जना कालीगढलाई एकाएक थप्पड हिर्काउन थाले । प्रहरी नै होलान् भनेर उनीहरू डराएर भन्न थाले– ‘सर, त्यस्तो यहाँ केही हुँदैन’ ‘अर्डर’ अनुसार पसलबाट ल्याइएको सुनबाट गरगहाना मात्र बनाउने हो । उनीहरूले यति भन्न नपाउँदै ती लुटेराले कालीगढको साथमा रहेको मोबाइल खोसे र बनाउँदै गरेका गहना पोको पारेर फरार भए ।
पीडितहरूले तत्कालै कारखाना सञ्चालक भारत कोलकाता घर भई हाल सोही स्थानमा बस्ने शिवप्रसाद माइटीलाई घटनाको जानकारी दिए । माइटीले प्रहरी नियन्त्रण कक्षमा खबर गर्नुभयो । लुटपाट भएको करिब २४ घण्टापछि घटनामा संलग्न सक्कली र नक्कली प्रहरी पक्राउ परेका छन् । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी लुटपाटमा तीनजना सक्कली र छ जना नक्कली प्रहरी प्रयोग भएको जानकारी दिएको छ । महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश अमात्यले लुटपाटमा
महानगरीय प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टेमा कार्यरत तीन जना प्रहरी कर्मचारी संलग्न रहेको जानकारी दिनुभयो ।